विप्लव खतराको घेरामाः पक्राउको तयारीमा सुरक्षा निकाय, विध्वंशकारी घोषणा (निर्णयसहित)
कारबाहीको सूचिमा सहयोगीहरु पनिः हतियार बुझाउन आह्वान
प्रकासित मिति : २०७५ चैत्र १, शुक्रबार प्रकासित समय : १२:५६
काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहलाई अपराधिक तथा विध्वंशकारी घोषणा गरेसँगै उक्त पार्टीका नेताहरुमाथि सुरक्षा निकायको निगरानी बढेको श्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । सरकारको निर्णसँगै विप्लव समूहका नेताहरुमाथि सुरक्षा चुनौति बढेको हो ।
यसअघि विभिन्न घटनाहरुमा संलग्न रहेको आरोपमा उक्त समूहका नेताहरु पक्राउ परेकोमा पछिल्लो समयमा भने विप्लव नै सुरक्षा निकायको खोजिको सूचिमा रहेको बुझिएको छ ।
उक्त समूहले राज्यको कानुनलाई चुनौति दिदै आफ्नो गतिविधि बढाएको भन्दै सरकारले विप्लव लगाएतका उच्च पदस्थ नेताहरुमाथि आफ्नो निगरानी बढाउँदै आएको छ ।
सरकारले मन्त्रीपषिद्बाट उक्त समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि सुरक्षा निकायहरु विप्लव लगाएतका नेताहरुलाई पक्राउ गर्नका लागि उच्च तयारीको अवस्थामा रहेको श्रोतबाट खुल्न आएको छ ।
सुरक्षा निकायले विप्लव लगायत उक्त समूहका नेताहरुको बारेमा विभिन्न श्रोतबाट जानकारीहरु लिइरहेको र आवश्यक तयारी गरेर पक्राउ गर्ने योजना अघि सारेको बुझिएको छ ।
एक जना सुरक्षा अधिकारीले भने–‘सरकारले अपराधिक समूह भनेर घोषणा गरिसकेको छ, उनीहरुका गतिविधि हिंसात्मक बन्दै गएका छन, हामीसँग सबै सूचना र जानकारीहरु छन तर सरकारको निर्देशनसँगै आन्तरिक तयारीको योजना अघि बढाउँछौं ।’
यतिबेला विप्लव लगायतका नेताहरु पार्टीको योजना अनुसार आन्तरिक सुरक्षामा रहेको बुझिएको छ । उनीहरु सरकारको प्रतिबन्धलाई कसरी जवाफ दिन्छन, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
उक्त समूहको आन्तरिक संगठनले जनयुद्धको बाटो समात्दै क्रान्तिको उद्घोष गर्ने सम्भावना न्यून रहेको आंकलन सहित सरकारले त्यस्तो कडाइ गरेको हुन सक्ने धेरैको अनुमान रहेको छ ।
कतिपयले सरकारको निर्णयले क्रान्तिकारी पार्टीहरु बिचको एकतालाई बलियो बनाउँने र त्यसले क्रान्तिकारी योजनामा मल जल गर्ने खालको विश्लेष समेत गर्ने गरेका छन । सरकारको निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना र भविष्यको आंकलन गरिएको पाइन्छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बिहीबार सार्वजनिक गरेपछि सुरक्षा निकयलाई उच्च तयारीमा राखिएको खुल्न आएको हो ।
सरकारले संगठित अपराध गरेकाले ‘विप्लव’ समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको स्पष्ट पारेको छ । संगठित अपराध ऐन–२०७०, फौजदारीलगायतका कानुनलाई टेकेर सरकारले प्रतिबन्ध लगाइएको प्रष्ट पारेको छ ।
उक्त समूहसँग भएका सम्पूर्ण किसिमका अवैध हतियार बुझाउन पनि विप्लव समूहलाई सरकारले आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । फागुन महिनाका पाँच बैठकका निर्णय सरकारले सार्वजनिक गरेको हो ।
त्यस्तै विप्लव समूहलाई सहयोग गर्नेलाई समेत सरकारले कारबाही गर्ने बताएको छ । सरकारले भनेको छ–‘वार्तामा आए रातो कार्पेट, नत्र सुरक्षा कारबाही हुन्छ ।’
फागुन १३, १५, १९, २६ र २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु यस प्रकारका छन ।
नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरु
६. निम्न प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
क) १३२(३३ के.भी. सुनवल सवस्टेसन निर्माण गर्न।
घ) सान्जेन (माथिल्लो) १३२ केभी प्रशारणलाईन निर्माण गर्न।
१४. भारतका लागि नेपालका आवासिय राजदूत श्री निलाम्बर आचार्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालका आवासिय राजदूत श्री डा अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीसरह मर्यादा कायम गरिएको छ।